Utsi Hwepasi Hwevanhu 2018 | Kuchengetedza Kunyorera & Kutungamirira
Nzira Yokuita Kuti Kuwedzererwa Kwako Kuve nekupedzisira nekunyora kwakakodzera nekugadzirisa!
Shamba mirayiridzo usati wagfeka:
Zvinonyanya kukosha kwauri kuti ugeze zvidzidzo zvako ne conditioner chete usati waisa. Izvi zvichaita kuti bvudzi rive rakanyorova uye rikanganise pasina.
Tinokurudzira Aussie Moist kana Herbal Essence Hello Hydration (inogona kuwanika kuWalmart uye dzimwe nzvimbo dzinotengesera mabhizimusi) kana kuti chero chigadziri chakagadzirirwa kuti chishongedze bvudzi.
Tora zvisungo zvose kubva pahomwe yako, zvakanyorovesa bvudzi nemvura inodziya kusvikira micheka yose yakazara. Uine hutachiona chete, uzadze vhudzi uye uine jira rinorema, Denman brush, wig brush kana kuti bhiza rinoputika chimiro kuburikidza nevhudzi uye shenura kunze.
nokuti Kinky Curly textures Kuwedzerwa kwemberi kunosungurudza bvudzi kumusoro kune hanger uye kubvumira bvudzi kuti rive rakaoma. ICHI CHICHAITA KUTI CHINHU CHOKWADI CHINHU CHOKWADI NOKWADZA MAPURI POP! HADZIDZIDZA kuoma mvere.
nokuti Afro Kinky textures bvudzi rakagadzika pane tambo uye kubvumira mweya wakaoma, izvi zvinodzivirira kukuru shrinkage. Unogonawo kumira pane hanger kana ukasarudza. Ndapota shandisai zino rakasvike rinosangana chete kana bvudzi rakanyoroveswa uye bhururu reDenman kuti rondedze zvipfeko. Rega kuoma.
nokuti kinky straight textures iwe unogona kuoma mhepo kana kupisa kuoma bvudzi.
nokuti Wigs tapota ona vhidhiyo yekudzidzisa iri pasi apa. Iwe uchaona kuti sei wighi inoita semufananidzo.
Pano paMyNaturalHairExtensions.com tinotenda mukuwana mari yakawanda ye buck yako. Kutenga bvudzi rakanaka kunokutora iwe kusvika ikozvino! Kuchengetedza bvudzi kwakakodzera, mazano ekunyora, uye kugadzirisa kuchaita kuti hupenyu hwako huve hurefu kwenguva refu.
Dzoka The Shedding Isati Yaitika!
Iko kungotarisana nemashoko acho, ALL HAIR SHEDS ... asi kune nzira dzekuderedza zvikuru kudurura. A
Chokutanga chengetedza zvipfeko zvako. Izvi zvakakosha chaizvo! Isu tinopa sevhavha yekodhi nemari shoma ye $ 10.
Chechipiri, SHANDISA kushandisa brisle mabhurushe sezvavanowanzochera kune rumwe ruvara rwebvudzi ndokubvarura kubva pachigamba. Nguva dzose shandisa mazino mazino kana paddle shashi.
Shamba uye Mamiriro Emo Musoro Wako Zvakanaka!
Kuchenesa bvudzi ratinokurudzira Giovanni's Organic Cleansing Shampoo. Nzira isina mari inodhura ndeye Herbal Essence Hello Hydration Shampoo.
Kufanirwa nevhudzi ratinokurudzira Herbal Essence Hello Hydration (yedu #1 sarudzo) kana chero chigadziri chakagadzirwa nokuda kwebvudzi. A
Iva nechokwadi chokuti vose vanonzwa vatovhenekera uye vakakwevedzwa munharaunda sokunge kuti kupa 2 chikamu ponytails. Dzorera musoro wako kune rumwe rutivi pasi pemvura uye usabvumira mvura kuti izadze vhudzi rako, ichishanda imwe chete panguva. Wedzera shampoo kune zvanza zvako uye shandisa maoko ako pasi pasi bvudzi rako kubva kune imwechete kusvika kune rumwe. Usasvina kana kuisa bvudzi kuti uite rather sezvo izvi zvichangoita matanho asina kufanira! Ramba uchinyura maoko ako kuburikidza nevhudzi rako kune maminitsi e5. Shenesa nekubvumira mvura kuti iyerere nemvere dzako sepakutanga, iwe unogona kuisa maoko ako kuburikidza nevhudzi rako kuti ufambise kushambadza asi yeuka usakanda kana kuisa bvudzi. Bhora nechirasi uye bvumira bvudzi kuAIR DRY
Shandisa nzira imwechete yewachomukati uye co-wash
Shampoo: Pamwe kamwe masvondo e3
Co-Shambidza (chigadzirisa kushambidza): Sezvaunenge uchida
Usati Waenda Kumubhedha:
DZENGAI NOKUDZIDZA NOKUDZIDZA KUNA KUTI UENDE
Zvakakosha kutarisa bvudzi rako usati waenda kunorara. Bvudzira bvudzi rako usiku necheki yekasiki / satin kana sarki / satin bonnet. Mabhandi anopa ruzivo rwemarefu kwenguva refu anoita zvakanaka. (ona pic iri pamusoro)
Pamusoro pemakumbo / mavara anonyorera tinokurudzira kuisa 5-10 yakakura twist kana bhudzi muvhudzi rako nekuisa pasi pehombodo.
Nokuda kwakananga mavara tinokurudzira kuvhara bvudzi rako nekuisa pasi pechirasi chesiki / satin.
Kutevedzera husiku huno hunoita kuti mazamu ako apedze kwenguva yakareba, tarisa zviri nani, uye kudzivirira kutengesa kunotungamirira kukudurura zvakanyanya.
Bata zvinyorwa zvako sezvinonzi ndiko kwaunoita bvudzi rako chaiye!
IYI CHINONYANYA CHINONYANYA KUNYANYA: Kana iwe uchida mazamuro ako vachakuda zvakare! Heano mamwe maDo & Dha ​
bvumira bvudzi rako kuti rive rakaoma kana ukasarudza kuomesa nguva dzose ushandisa chekudzivirira moto
apo kunyorera bvudzi rako nemishonga inopisa zvinoshandisa nguva inodzivirira kupisa ESPECIALLY nemashizha ekudzivirira. Kupisa kwakanyanya kunogona kukonzera kupisa kunopisa uye kuchinja (kusunungura Walmart ine utsi hwakasiyana-siyana hwekudzivirira kusarudza kubva. John Freida's heat defeat thermal guard guard spray is a good to use because its light weight and oil free. A
Tevera tsika yedu yeusiku kana kuumba yako pachako.
Tevera regimen yedu yekugeza zvakanyatsonaka.
Shandisa paddle bushes uye mazino mazino marefu
Deep Hali mvere dzako nguva dzose
Kana ukashandisa chero ruvara rwemashoko, dhayi, kubvisa mabheji, kana mivara yakagadzikana iva nechokwadi chekutsvaga nyanzvi yepayenzi kana kuti nyanzvi yemuvara. Isu hatisi vimbiso yepamusoro mushure mekupi kwekugadzirisa kwekemikisi saka tapota iva nechokwadi chekudzivirira kutyara kwako.
HADZADZISA CHINHU CHEZVINHU ZVAKANAKA KUVANHU VAKO! Bvudzi rinokonzera matte uye kubata kana michina yekugadzira yakawedzerwa. Kana uine zera rakapetwa uye unoda kuvekisa bvudzi kana kuderedza frizz ingoshandisa zvishomanana anti-frizz serum. Kana michina yakawedzerwa iwe unogona kuvabvisa ne cowashing ne Herbal Essence Hello Hydration conditioner pasina kuoma.
Usamboedza kuedza, kushambidza, kana kuvhara bvudzi rako kana wakaneta kana kuti uri kumhanya! Ichi chiyeuchidzo chekushungurudzika uye chichaita kuti iwe uve wakaoma nevhudzi rako. A
usashandise mabhurusi bristle.
Usaedza chero chero shanduko yemakemikari kune vhudzi kunze utungamiri hwehutungamiriri
Bvudzi rinotarisira humwe hutsika
HATASI KUDZIDZA DENMAN BRUSH NEZVAKO HAI! Pane imwe nzira nzira yakanakisisa yekugadzirisa ndeye mvura inogadzirisa uye dzino rinowira rinouya. Chikafu chinoputika chichashanda pamwe chete. Kushandisa kubhururuka kweDenman kunogona kuva kwakaoma kwazvo, nguva inopedza uye inogona kubvarura bvudzi kubva pacheka. Usaedza kuvhara bvudzi iri kana rakaoma. Iva nechokwadi chokuti yakanyanyisa mvura yakawanda uye inogadzirisa.
Tsvudzi iyi inobata zvakanakisisa nekubvisa kunze uye kubuda kunze. Chinhu chipi zvacho chakakosha michina yaunoda nokuda kwebvudzi rako chaiyo inogona kushandiswa neizvi. Tsvudzi iyi inoda mutezi seyakadzama 4b 4c mvere. Kusvetuka uye kubuda kunopera kwekanguva nekuve bvudzi rino uye kunobatsira kuputika kutambanudza!
Ona Ichi Chirongwa Chakabudiswa peji ino.
Isu tinokurudzira kushandisa shanduro yeDenman kana yakareba yakatora muzinga pamwe nevhudzi. Tsvudzi iyi yakafanana neAfro kinky inoda humvu. Chengetedza chiedza chinobva mumamiriro ezvinhu uye mvura inoshanda zvakanaka.
Apo kusanganisa kushandisa shanduro yeDenman zvakare kunoita kuti mapepa apone.
Kinky Yakarurama, Perm Yaki, coarse yaki, Bhuna Yakarurama:
Tsvudzi iyi inoda kunyanya kugadziriswa uye haifariri zvinhu zvizhinji. Izvo hazvizozvibata zvakanaka nemuti wechigadzirwa.
Kana zvichibvira edza kuvhara bvudzi rako usiku kuti uderedze tangling uye kuti ugadzire nzvimbo yakanaka yezuva rinotevera.
Ndinokutendai Nekushanyira Tsvangu Dzangu Dzomusango!